Dalxiiska Jamaica wuxuu ku baaqayaa fikradaha hoggaamiyeyaasha adduunka ee ka-soo-kabashada masiibada kadib
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska Jamaica wuxuu ku baaqayaa fikradaha hoggaamiyeyaasha adduunka ee ka-soo-kabashada masiibada kadib
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica ahna Gudoomiyaha Hay'ada Heerka sare ee Shaqada ee Dowladaha Mareykanka (OAS) Edmund Bartlett, waxay ku baaqeysaa in la sii wado isdhaafsiga u dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah iyo warshadaha si loo dhameystiro qorshe hawleedka wax ku oolka ah ee soo kabashada ee maraakiibta dalxiiska iyo diyaaradaha. -marxaladda faafida.
Qorshe hawleed soo kabasho wax ku ool ah oo firfircoon wuxuu u baahan yahay qaab dhinacyo badan leh oo ku wajahan qaybaha kala duwan ee soo kabashada.
Baaqa maanta waa isdhaafsiga sii socda ee u dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah iyo warshadaha - waa inaan maqalnaa dhammaan codadka.
Iswaafajinta borotokoolka, dalxiiska joogtada ah, iskaashiga guuleysta ee dowladeed iyo kuwa gaarka loo leeyahay, maalgashiga oo kordhay, iyo hubinta halka loo socdo waa inay noqotaa habka.
Hadaladan waxaa la sheegay horaantii maanta, inta lagu gudajiray shirkii macquulka ahaa ee Gudida Shaqada ee Dalxiiska ee udhaxeeya Mareykanka (CITUR), oo ay abaabuleen OAS. Wasiirka waxaa u matalay agaasimaha wasaarada dalxiiska ganacsiga iyo xiriirka caalamiga Tyesha Turner.
Wicitaankeyga maanta waa isweydaarsiga sii socda ee u dhexeeya Dowladaha Xubnaha ka ah iyo warshadaha - waa inaan maqalnaa dhammaan codadka. Waxaan intaa ka sii dardaarmayaa in hab baaris lagu sameeyo talooyinka iyo aaladaha la soo jeediyay ee gobolkeenna looga badbadinayo aaladaha iyo talooyinka la midka ah ee gobollada kale iyo saamaynta ay ku yeelan karto safarka gobollada oo ah udub-dhexaadka dakhliga dalxiiskayaga, ”ayuu yiri Turner oo ku hadlaya magaca Wasiirka.
“Qorshe hawleed soo kabasho wax ku ool ah oo firfircoon wuxuu u baahan yahay qaab dhinacyo badan leh oo ku wajahan qaybaha kala duwan ee soo kabashada - iswaafajinta borotokoolka, oo ay ku jiraan nidaamyada fayo-dhawrka iyo soo galitaanka; dalxiis waara iyadoo la tixgelinayo deegaanka; wada-shaqeyn guuleysata oo dhex marta dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay; kordhinta maalgashiga iyo hubinta meesha loo socdo. Qaabka noocan oo kale ah waa inuu fududeeyaa oo uu dhiirrigeliyaa qorshe dhammaystiran, dhammaystiran, ballaadhan, oo wax ku ool ah oo noogu dhaqaaqa himilooyinkayaga, ”ayay raacisay.
Waxay ku nuuxnuuxsatay in wasiir Bartlett uu ku boorrinayo xubnaha inay ku daraan qorshe hawleed soo kabasho wax ku ool ah oo firfircoon kaas oo adeegsanaya qaab dhinacyo badan leh dhinacyada kala duwan ee soo kabashada. Tani waa inay diirada saartaa iswaafajinta borotokoolka, oo ay kujiraan hab-nololeedka fayodhawrka iyo nidaamyada soo galida; dalxiis waara iyadoo la tixgelinayo deegaanka; wada shaqeyn guuleysata oo dhex marta dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay; kordhinta maalgashiga iyo hubinta meesha loo socdo.
"Qaabka noocan oo kale ah waa inuu fududeeyaa oo uu dhiirrigeliyaa qorshe dhammaystiran, dhammaystiran, wax-ku-ool ah oo wax ku ool ah oo noogu dhaqaajiya himilooyinkeenna," ayay tiri.